Istilzam Nasıl Yazılır Ne Demek Sözlük Anlamı Nedir - Nasıl Yazılır. İnfo
Ungayibhala njani i-Istilzam
Istilzam Upelo oluchanekileyo
Umntwana wakho uqala ukufunda ngosuku lokuqala lokuzalwa kwakhe, kwaye uqala ukubhala ngosuku lokuqala aqala ngalo ukufunda. Ukubhala kunye namagama abaluleke kakhulu kubomi bethu. Upelo lwamagama ngokuchanekileyo lubaluleke kakhulu kwaye lubalulekile. Nceda uqaphele ukubhala amagama ngokuchanekileyo, kuba siya kuqhubeka ngendlela esifundisisa ngayo. Ukuba sifunda ngokuchanekileyo, siya kukuqhela ukuthetha nokubhala ngokuchanekileyo.
Awunakufunda kuphela malunga noku kupelwa kakubi, kodwa unokongeza indlela-to-write.info idilesi yewebhu kwiibhukumaka zakho kwaye uyijike ibe yindawo yomthombo. Nanini na xa ufuna, ungangena kwiwebhusayithi yethu ngefowuni okanye ikhompyuter kwaye ufumane ulwazi malunga nemigaqo yopelo echanekileyo yamagama onawo engqondweni. Unako nokubeka izimvo phantsi kwesihloko ukubonisa iingcinga zakho malunga nemithetho yopelo yamagama, kwaye ubhale isampulu yakho izivakalisi ezichanekileyo zopelo.
Kuthetha ntoni uIstilzam?
Ungayibhala njani i-Istilzam?
Isikhokelo soPelo lweIstilzam